I-Podcast: I-AfricArXiv kunye ne-TCC ye-Afrika yeNtsebenziswano yokuBoneka koPhando lwase-Afrika-AfricArXiv
E papashwe ngu UJohanssen Obanda on 7I Disemba 2021 7I Disemba 2021
Ngo-Okthobha ka-2021, i-AfricArXiv, i-African Open Access Portal, bhengeza ubambiswano kunye neZiko loQeqesho kuNxibelelwano I-TCC yase-Afrika ukwakha nokulawula uluntu lwamazwe ngamazwe lwezifundiswa oluya kutyebisa ukubonakala kophando lwaseAfrika. UJoy Owango ovela kwi-TCC Africa kunye noGqr. Johanna Havemann ovela kwi-AfricArXiv babelana nzulu malunga nentsebenziswano kule podcast ebizwa ngokuba yiVelocity of Content, eququzelelwa nguChris Kenneally, ovela kwiZiko lokuCwangciswa kweLungelo loBugcisa: https://velocityofcontentpodcast.com/an-african-platform-for-african-research/
IPodcast: Iqonga laseAfrika loPhando lwaseAfrika kunye noGqr. Jo Havemann kunye noJoy Owango
“Eli liqonga lama-Afrika, lama-Afrika, kuphando lwaseAfrika. Ayinakubangcono kunoko,” u-Owango uxelele uChris Kenneally weCCC.
“I-TCC Afrika ibe ngumthetheleli osixhasa kakhulu umsebenzi wethu, kwaye sele sisebenze kunye ngokungekho sikweni, njengoko abantu nemibutho besenza kwi-ikhosistim ngokusebenzisana,” uyacacisa. "Ngesi sibhengezo sentsebenziswano sisesikweni, silapha ukuza kuphucula imisebenzi yethu kunye nokunika i-AfricArXiv ikhaya eKenya, kunye ne-TCC Afrika ukuze ibonwe njengeqabane elithembekileyo labachaphazelekayo kunye namaziko ase-Afrika."
tags: Ukufunyanwa kophando lwaseAfrikafikelela ufikelelouvulele isayensiI-TCC yase-Afrika
I-Dawn eNtsha yabaphandi base-Afrika njenge-TCC Afrika kunye ne-AfricArXiv Yazisa iNtsebenziswano eseSikweni
Iziko loQeqesho kuNxibelelwano (i-TCC Afrika), elisekelwe kwiYunivesithi yaseNairobi, eKenya, kunye ne-pan-African Open Open Access portal i-AfricArXiv apha ibhengeza isivumelwano sethu esisesikweni sentsebenziswano ngenjongo yokudala indlela yobuchule yexesha elide kunye nozinzo ekwakheni kunye. ukulawula uluntu lwabafundi belizwe lonke oluya kuphucula ukubonakala kophando lwaseAfrika.